Umkhiqizi nomhlinzeki weChina Aluminium Checkered Plate | URuiyi
Ubuso buqoshwe ngephethini eyodwa, ngokusebenza okuhle kokucubungula, ukuqina okuphezulu, ukumelana nokugqwala, ne-oxidation enhle kakhulu neminye imiphumela yokwelashwa komhlaba. Inezinzuzo zokusebenza okuhle kakhulu, iphethini ecacile nendawo ehlanzekile. Isetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni imishini nemishini, izakhiwo zokushisela kanye nezinsimu ezidinga amandla athile.
Umsebenzi oyinhloko ukulwa ne-skid nokuhlobisa. Inokusetshenziswa okuhlukahlukene, okusetshenziswa kakhulu ekwakhiweni nasekuthuthweni. Amapaneli wegridi ye-aluminium okuhlobisa angaphansi kochungechunge lwamapaneli we-aluminium amsulwa. Ngokwesimiso somhlaba wonke sokuqamba igama, isilinganiso esifanelekile sokuqukethwe kwe-aluminium kwe-aluminium grating yokuhlobisa ingaphezu kwama-99.5%. Ngenxa yokuhlanzeka okuphezulu kwe-aluminium gratings kanye nenqubo yokukhiqiza elula, intengo ishibhile. Uchungechunge olusetshenziswa kakhulu ezimbonini ezivamile. Izinhlobo zephethini ezivamile zokuhlobisa i-aluminium zokuhlobisa zingu-1, 2, 3, no-5. Njengoba isidingo semakethe siguquka, kuzoba nezinhlobo ezahlukahlukene zamapuleti amaphethini.
Izinsimbi zensimbi ye-aluminium ezincanyana ibhekisa kusayizi weshidi le-aluminium mm liphakathi kuka-0.15 no-2.0mm. Phakathi kwazo, ishidi le-aluminium elijiyile elingu-0.5 mm, ishidi le-1mm aluminium kanye ne-2mm aluminium plate yizilinganiso zobukhulu be-aluminium ezithandwa kakhulu. Uma ulinganisa ukujiya kwepuleti le-aluminium ngamasentimitha, ishidi eli-1 16 le-aluminium licishe libe yi-1.5mm ukujiya, futhi lolu hlobo lweshidi le-alu nalo lingele-sheet aluminium elincane. Mayelana ne-aluminium sheet sheet encane, i-12 gauge aluminium sheet (2.0mm), i-14 gauge aluminium sheet (1.6mm), 16 gauge aluminium sheet (1.3mm) kanye ne-18 gauge aluminium sheet (1.2mm) konke kungokwalolu hlobo.
Lolu hlobo lweshidi le-aluminium elincanyana linezinhlobonhlobo zezicelo, ikakhulukazi embonini yezokuhlobisa yokwakha. Imishini yokukhanyisa izakhiwo ezahlukahlukene, ikhaya lethu, isikole, isibhedlela, inxanxathela yezitolo nokunye. Kokubili ngokubukeka nokuqina, amashidi amancane we-aluminium angasisuthisa. Ngaphezu kwalokho, le nsimbi yensimbi ye-aluminium ezacile ingasetshenziswa futhi njenge-reflector yelanga, futhi ingenza umnikelo omkhulu kithina ekongeni ugesi.
I-5754 h114 aluminium checkerboard ilungele kakhulu ukusetshenziswa okunezidingo zokusebenza okuphezulu, njengemikhumbi emikhulu yokuhamba ngezinyawo, imibhoshongo yomoya yasendlini, umkhumbi / iphansi / izindonga, amabhuloho abahamba ngezinyawo, izitebhisi zomsebenzi wasemoyeni, amapulatifomu ezindaba, njll.
I-1050 aluminium grating board engu-6061 aluminium grating board yendawo yokuthutha yomphakathi kanye nendawo yangasese yomphakathi
5086 Aluminium nehele for zokuhamba esiqandisini
I-4017 aluminium pedal isetshenziswa kakhulu ekuhlobiseni izakhiwo
Langaphambilini 6061-T651 Aluminium Ishidi
Olandelayo: I-Aluminium Composite Cladding
Ama-Aluminium Wall Panels Ngaphandle